Deeq bixiyayaasha McKnight waxay jawaab deg deg ah ka heli karaan su'aalaha caadiga ah arjiga deeq qaataha iyo habka warbixinta. Waxay kaloo heli karaan aaladaha isgaarsiinta iyo tilmaamaha sida loo wadaago wararka deeqda dhowaan la helay. Fadlan booqo Barnaamijyada bogga loogu talagalay macluumaadka qoto dheer ee ku saabsan aagagga aan diiradda saarno.
Fadlan ogow: Waxaan maanka ku haynaa in ururradu ay la kulmayaan caqabado waawayn oo ay keeneen shirkadda 'Covid-19', waxaana ujeedkeennu yahay inaan ka fududeyno culeyska qaar ka mid ah kuwa wax bixiya. Waxaan ku martiqaadeynaa deeq-bixiyeyaasha inay la hadlaan barnaamijkooda xiriirka si looga wada hadlo wax ka beddelka heshiisyada deeqaha, sida ujeeddada deeqda ama waqtiga loo cayimay.
Haddii aad jeclaan lahayd inaad ku darto qoraal ku saabsan McKnight dhamaadka siideyntaada ama ku dhawaaqistaada, fadlan isticmaal luqadda soo socda ee boorarka la ansixiyay (la cusboonaysiiyay Oktoobar 2021):
Mu'asasada McKnight, aasaaska qoyska ee Minnesota, waxay horumarisaa cadaalad, hal abuur, iyo mustaqbal badan halkaas oo dadka iyo meeradu ku koraan. Waxaa la aasaasay 1953, McKnight Foundation waxay si qoto dheer uga go'an tahay horumarinta xalalka cimilada ee Midwest; dhisida Minnesota loo siman yahay oo loo wada dhan yahay; iyo taageeridda fanka iyo dhaqanka Minnesota, cilmiga neerfaha, iyo cilmi-baarista dalagga caalamiga ah.
Markii ugu horreysay ee lagu dhawaaqo maalgelinta, waxaan guud ahaan codsaneynaa in deeq -bixiyeyaashu ay sugaan illaa McKnight uu qaybiyo ogeysiisyada deeqda rasmiga ah, qiyaastii hal bil kadib oggolaanshaha guddiga. Waxaan u furan nahay inaan ka reebno macquul ah. Deeq -bixiyeyaasha doonaya inay goor hore ku dhawaaqaan ujeeddo gaar ah oo istiraatiiji ah waa inay la xiriiraan xubin kooxda isgaarsiinta ah communications@mcknight.org.